၅ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကျောနာနာကျင်မှုအတွက်ယောဂ (ဆန့်) ခြင်း Vondt.net
နောက်ကျောနာကျင်မှုများအတွက်5ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း
06 / 06 / 2016 /0 မှတ်ချက်/i အရည်အသွေးအဆောင်းပါးများ, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း, နောက်သို့, ဆန့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု/av ရေတံခွန်
မင်းနောက်ကျောကိုနှောင့်ယှက်လား? နောက်ကျောနာကျင်မှုကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည့်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း (၅) ခုရှိပါသည်။ နောက်ကျောနာကျင်မှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူမျှဝေဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
ကြွက်သားများနှင့်ကြွက်သားများတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အနားယူရာတွင်ယောဂနှင့်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အသုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အလွန်များများထိုင်ကြပြီး၎င်းသည်နောက်ကျော၊ ပေါင်နောက်ကျောနှင့်ထိုင်ခုံများကြွက်သားများလွန်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပုံမှန်ဆန့်ခြင်းသည်ခိုင်မာသောကြွက်သားများနှင့်ခိုင်မာသောအဆစ်များကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
၁။ Ūrdhva mukha śvānāsana» (ခွေးဝါသနာပါသူ)
ဤသည်ယောဂအနေအထားရင်ဘတ်ဖွင့်လှစ်, ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားဆန့်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောလမ်းအတွက်အနိမ့်နောက်ကျောကိုသက်ဝင်။ နံရံအလယ်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သင့်လက်ဖဝါးများကိုကြမ်းပြင်ပေါ်တင်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ခြေထောက်များကိုအတူတကွဆွဲ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဖိထားသည့်သင်၏ခြေထောက်ထိပ်ကိုဖိပါ - တစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏လက်ကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏နောက်ကျောမှခွန်အားကို အသုံးပြု၍ သင်၏ရင်ဘတ်အားကြမ်းပြင်ပေါ်မှတင်ရန်။ သင်၏ခြေထောက်များကိုဖြောင့်တန်းစွာ ထား၍ အသက် ၅ မှ ၁၀ အထိနက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူမှုအတွက်နေရာယူထားပါ။ သင်လိုအပ်သည်ဟုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
၂။ "Ardha Matsyendrasana" (အလှည့်လေ့ကျင့်ခန်း)
ဤသည်ထိုင်နေသောယောဂအနေအထားကျောရိုးနှင့်နောက်ကျောကြွက်သားအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆောင်းပါးရှိအခြားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါကယင်းကိုမကြိုးစားပါနှင့်။ နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ဘက်သို့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖွင့် - လူရှုပ်မနေပါနဲ့, ဒါပေမယ့်ဘေးထွက်ရန်အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာရွှေ့။ ၇-၈ နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူမှုအတွက်အနေအထားကိုကိုင်ထားပါ၊ ထို့နောက်အခြားတစ်ဖက်တွင်ပြန်လုပ်ပါ။
၆။ Marjariasana Bitilasana (ကြောင်ကုလားအုတ်လေ့ကျင့်ခန်း)
ကြောင်ကုလားအုတ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကျောရိုးတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုလှုပ်ရှားစေနိုင်သည့်လှပသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ကျော၊ ရင်ဘတ်နှင့်လည်ပင်းတို့ကိုပိုမိုချောမွေ့စေသည်။ လည်ပင်းနှင့်နောက်ကျောတွင်တောင့်တင်းမှုကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေးခုလုံးတွင်ရပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏နောက်ကျောကိုတဖြည်းဖြည်းကြမ်းပြင်သို့အောက်သို့တွန်းတင်ပါ။ 8-10 စုံကျော် 3-4 ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြန်လုပ်ပါ။
၄။ Balasana (ရင်ဘတ်နှင့်ကျောပြင်ခြင်း)
ဒူးထောက်။ မတ်တပ်ရပ်လျက်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ကျစေပါ။ သင်၏ခေါင်းကိုမြေပေါ်သို့ချထားပြီးသင်၏လည်ပင်းနှင့်နောက်ကျောအထက်သို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းမခံစားရသည်အထိသင်၏လက်များကိုရှေ့တွင်ထားပါ။3စက္ကန့်ကြာချိန်၏ 4-30 စုံလုပ်ဆောင်တယ်။
၅။ Kapotasana (Duestillingen)
တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်ဒူးတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချို့လိုအပ်သောကြောင့်အနေအထားသည်အစပြုသူများအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိရောက်သောအကြောင်းပြချက်မှာတင်ပါးဆုံရိုးကကျောနာကျင်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အသက် ၅ မှ ၁၀ အထိရှူရှိုက်မိသောအနေအထားကိုကိုင်ထားပါ။ ထို့နောက်အခြားတစ်ဖက်သို့ပြောင်းပြီးလိုအပ်ပါကထပ်မံလုပ်ပါ။
ဤရွေ့ကားကောင်းမွန်သောယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပြီးအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်နေ့စဉ်ပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော် hectic weekdays များသည်အမြဲတမ်းခွင့်ပြုထားသည်မဟုတ်။ accept သင်ကအခြားနေ့ကအမှုကိုပြုရရင်တောင်။
အားလုံးကမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ အစအ ဦး ၌သင့်အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေပြီးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တည်ဆောက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အစတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ အမှန်တကယ်သင်သည်ပျက်စီးသွားသောနေရာများ (ပျက်စီးသွားသောတစ်သျှူးနှင့်အမာရွတ်တစ်သျှူး) များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြိုဖျက်ပြီး၎င်းကိုကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးဖြင့်အစားထိုးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်သော်လည်းအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်ရောဂါရှိပါကဤလေ့ကျင့်ခန်းများကသင့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သလားကိုသင့်အားဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကြမ်းတမ်းသောမြေအနေအထားသို့သွားရန်သင်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲပါတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပို့ပေးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်လိုလားလျှင်၊ ကဲ့သို့ နှင့် Facebook စာမျက်နှာ get မှတဆင့်အဆက်အသွယ်ရ ဒီမှာ။ သင့်မှာမေးခွန်းများရှိရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
နောက်စာမျက်နှာ \_ t - ခါးနာခြင်း? ဒါကိုသင်သိသင့်တယ်။
၁။ အထွေထွေလေ့ကျင့်ခန်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆန့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအကြံပြုပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၂၀ မှ ၄၀ မိနစ်ကြာလမ်းလျှောက်ခြင်းကတစ်ကိုယ်လုံးနှင့်အနာကြွက်သားများကိုကောင်းမွန်စေသည်။
2. အစပျိုးအချက် / အနှိပ်ဘောလုံး ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုသည်မှာ - သူတို့သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးသင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုတောင်ကောင်းစွာထိမိနိုင်သည်။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီနိုင်မှုမရှိပါ။ မတူညီသောအရွယ်အစားရှိခလုတ် ၅ ခု / အနှိပ်ဘောလုံးများအပြည့်အစုံဖြစ်သောအောက်ပါပုံကိုနှိပ်ပါ။
3. လေ့ကျင့်ရေး: အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ဘက်များ၏ (ဥပမာအဖြစ်) လေ့ကျင့်ရေးလှည့်ကွက်နှင့်အတူအထူးလေ့ကျင့်ရေး ကွဲပြားခြားနားသောခုခံ၏6knits ၏ဤပြည့်စုံအစုံ) သင်ကအစွမ်းသတ္တိနှင့် function ကိုလေ့ကျင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Knit လေ့ကျင့်ရေးတွင်ပိုမိုတိကျသောလေ့ကျင့်မှုများပါ ၀ င်ပြီးယင်းကပိုမိုထိရောက်သောဒဏ်ရာကာကွယ်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုလျှော့ချခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
4. နာကျင်မှုသက်သာခြင်း - အအေးခံခြင်း ဇီဝကမ္မဗေဒ productရိယာကိုညင်ညင်သာသာအေးစေခြင်းဖြင့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့်သဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုအလွန်ပြင်းထန်ချိန်တွင်အအေးခံခြင်းကိုအထူးအကြံပြုပါသည်။ သူတို့ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်အပူကုသမှုကိုအကြံပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အအေးနှင့်အပူနှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်၏။
5. နာကျင်မှုသက်သာခြင်း - အပူပေးခြင်း တင်းကျပ်သောကြွက်သားများကိုနွေးထွေးစေခြင်းသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးစေပြီးနာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အောက်ပါတို့ကိုအကြံပြုပါသည် ပြန်သုံးနိုင်သောပူ / အအေး gasket (ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံဖတ်ရှုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ) - အအေး (အေးခဲနိုင်သည်) နှင့်အပူအတွက် (မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အပူပေးနိုင်သည်) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
6. ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း ထိုကဲ့သို့သော compression ဆူညံသံ ဒီလိုမျိုး ဒဏ်ရာရသူသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကြွက်သားများနှင့်ရွတ်များကိုသဘာဝကုသမှုအရှိန်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့သွေးလည်ပတ်မှုတိုးစေနိုင်သည်။
ဇီဝကမ္မဗေဒ (အအေးမိ / cryotherapy)
ကြိုးစားပါ - ISJIAS နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ကောင်းများ၊ နည်းလမ်းများ
ငါနာတယ် ပြန်. og လည်ပင်း? တင်ပါးနှင့်ဒူးခေါင်းများကိုပါရည်ရွယ်သည့်လေ့ကျင့်မှုတိုးမြှင့်မှုပြုလုပ်ရန်နောက်ကျောနာကျင်မှုရှိသူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ - ခိုင်ခံ့သောတင်ပါးအတွက် ၆ ခုလေ့ကျင့်ခန်း
မင်းသိလား - အအေးမိခြင်းဖြင့်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားများနာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သလား။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက် ဇီဝကမ္မဗေဒ အဓိကအားဖြင့်သဘာဝထုတ်ကုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် (သင်ဒီမှာမှာယူနိုင်သည်) သည်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အခြားအကြံပြုချက်များကိုလိုအပ်ပါက။
လူကြိုက်များသောဆောင်းပါး: - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသမှုသည်မှတ်ဉာဏ်အပြည့်ကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - အားကောင်းတဲ့အရိုးတွေအတွက်ဘီယာတစ်ခွက်လား။ ဟုတ်ကဲ့!
- သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းပါ Facebook ကစာမျက်နှာ.
ငါတို့တ ဦး တည်းရှိတယ် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်မှာ Ola နှင့် Kari Nordmann မှတဆင့်၎င်းတို့၏မေးခွန်းများကိုအဖြေရရှိနိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဝန်ဆောင်မှု ကြွက်သားကြွက်သားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ - သူတို့လိုချင်လျှင်လုံးဝအမည်မသိ။
ပုံများ - Wikimedia Commons ၂.၀၊ Creative Commons၊
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yogaklasse.jpg?media=1648573622 393 750 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2016-06-06 19:52:582022-03-18 17:25:18နောက်ကျောနာကျင်မှုများအတွက်5ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း
လေ့လာမှု - စတော်ဘယ်ရီသည်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချသည် လေ့လာမှု - သံလွင်ဆီတွင်ပါဝင်မှုသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုသေစေနိုင်သည်